Ciidamada Xoogga dalka oo u gurmaday Qoysas danyar ah oo kunool deegaanka dhanaane | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidamada Xoogga dalka oo u gurmaday Qoysas danyar ah oo kunool deegaanka...
Ciidamada Xoogga dalka oo u gurmaday Qoysas danyar ah oo kunool deegaanka dhanaane
Muqdisho October 1 (SNTV):-Ciidamada Xoogga dalka ayaa raashiin u qeybiyay Qoysas dan yar ah oo ku nool deegaanka Dhannaane oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeella hoose.
Qoysaskan danyarta ah ee Ciidamada Xoogga dalka u gurmadeen ayaa ka soo cararay deegaano fog oo ay kaga yimaadeen dhibaato ay maleeshiyada Al-Shabaab ku hayeen,waxayna Ciidamada Xoogga dalka Xoog uga saareen Al-Shabaab deegaanka.
Deegaanka Dhannaane ee Gobolka Shabeellaha hoose malahan Ceel-biyood,Kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa horay u diiday in la qodo,balse shacabka hadda waxay qabaan rajo maadaama Ciidamada Xoogga soo gaareen.
Qaara ka mid ah Shacabka deegaanka Dhannaane oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay iney ku faraxsan yihiin iney gurmad ka helaan Ciidamada Xoogga,halka maleeshiyadii Al-Shabaab dadka ay dhibaateynayeen,waxayna uga mahad celiyeen gurmadkii ay soo gaarsiiyeen.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Sareeye Gaas Daahir Aadan Cilmi Indho Qarshe ayaa muujiyay in Ciidamada Xoogga dalka ay deegaanka Dhannaane u tageen dadkooda oo dhiban ayna la garab istaageen gurmadkii ay awoodeen.
Ciidamada Xoogga dalka oo howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka wada Gobolka Shabeellaha hoose ayaa u suurta gashay iney xoog argagixisada Al-Shabaab uga saaraan deegaano badan.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo ballanqaaday horumarinta goobaha dalxiiska dalka
Next article10 ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay Kenya